Nice Name | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Nice Name
Posted by ဆုမြတ်မိုး on Feb 24, 2015 in Creative Writing | 15 comments
အပေါ်က ပိုစ့်လေးကိုဖတ်မိလို့ နာမည်အကြောင်းလေးရေးလိုက်ပါတယ် ။
နာမည်က ဆုမြတ်နဲ့စတဲ့ စာရေးဆရာမရဲ့နာမည်ပါ ။ စာရေးတာလည်းဝါသနာပါတော့ ကဗျာတွေ ၊ စာတွေ ဟိုပို့ဒီပို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ နာမည်အရင်းကိုသုံးချင်ပေမယ့် best seller ဆရာမရှိနေတော့ နာမည်ရဲ့တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်တဲ့ ဆုမြတ်ကိုယူ ၊ နှစ်သက်တဲ့မိုးရာသီ ရဲ့ မိုးကိုယူပြီးတော့ ဆုမြတ်မိုး ဆိုပြီး nick name ပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဆုမြတ်မိုးဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ မြန်မာ blog , forum တွေကိုဝင်ပြီး english forum , english blog မှာတော့ Bella ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသုံးပါတယ် ။ Bella လို့သုံးဖြစ်တာ Twilight ထဲက မင်းသမီးကိုသဘောကျလို့ပါ ။နာမည်နဲ့ပက်သက်ပြီးအမှတ်တရလေးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖုန်းစာအုပ်ဆိုပြီး တွေ့ရာနံပါတ်လျှောက်ကူးထားတဲ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ရှိပါတယ် ။ အဲဒီထဲမှာ မဂဇင်းဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ် ၊ ဂျာနယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်၊ မင်းသမီးမင်းသားနံပါတ်တွေလည်းပါတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ နံပါတ်တွေလည်းပါတဲ့အပြင် စာရေးဆရာ၊ဆရာမတွေရဲ့ စာအုပ်တွေမှာပါတဲ့ နံပါတ်တွေလည်းမှတ်ထားပါတယ် ။
တစ်ရက်နေ့က ပျင်းတာနဲ့သူငယ်ချင်းဆီဖုန်းဆက်မယ်လုပ်ပြီး ဖုန်းစာအုပ်လေးလှန် ၊ အဲဒီထဲမှာမှ နာမည်မပါဘဲ နံပါတ်ပဲမှတ်ထားတာလေးတွေတော့ ဒါတော့ ဟိုတလောကမှ အဆက်အသွယ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းပန်းသီးပဲနေမှာဆိုပြီး 0950***** နံပါတ်လေးကိုခေါ်လိုက်ပါတယ် ။ တစ်ဖက်က မိန်းကလေးအသံနဲ့ ဖုန်းပြန်ထူးတော့….ပန်းသီးသူငယ်ချင်း ဆုမြတ်…..ပါ ။ ပန်းသီးနဲ့ ပြောချင်လို့ပါ ပြောတေ့ဟိုဘက်က ပြန်မေးပါတယ်… အခုပြောနေတာက ဘယ်သူလဲပေါ့…။ ဒီကလဲ ဆုမြတ်.. ..ပါလို့ ထပ်ပြောတော့…နောက်နေတာလားဟင်တဲ့ ။ မနောက်ပါဘူး ပန်းသီးနဲ့ပြောချင်တာပါဆိုတော့…. ဟိုက ပန်းသီးမဟုတ်ဘူး အခုပြောနေတာလည်း ဆုမြတ်…. ပါဆိုပြီးစာရေးဆရာမက ပြန်ပြောတော့မှာ… ကိုယ်နဲ့ နာမည်တူတဲ့စာရေးဆရာမဖုန်းကိုမှားဆက်မိမှန်းသိပါတော့တယ်..။နှစ်ယောက်သား ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိ ကြောင်နေကြတာနဲ့ …. နောက်တာမဟုတ်ပါဘူး.. တကယ်နာမည်ရင်းပါဆိုပြီး မြန်မြန်ဖုန်းချလိုက်ရပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စာရေးဆရာပေမယ့် မိတ်တောင်မဆက်လိုက်ရပါဘူး။နောက်မှ အဲဒီဆရာမကို facebook ပေါ်မှာပြန်တွေ့တော့ ဖုန်းမှားဆက်ဖူးတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပြန်မိတ်ဆက်တော့ သူကမှတ်မိပြီးရယ်နေရပါသေးတယ် ။
ဆုမြတ်မိုးဆိုတဲ့ နာမည်လေးစွဲသုံးဖြစ်နေတာ 2009 လောက်ထဲကနေပေါ့ ။ စာတိုပေစလေးတွေ print ပေါ်လည်းရောက်ပြီးပြီမို့ ရှေ့လျှောက်နာမည်ပြောင်းဖို့အစီစဉ်တော့မရှိတော့ပါဘူး ။လောလောဆယ် ကျောင်းနဲ့မအားလို့ပုံမှန်မရေးဖြစ်ပေမယ့် ၀ါသနာအရ ရှေ့ဆက်ပြီး အားရင်အားသလိုရေးဖြစ်နေဦးမှာပါ ။
နာ့ ပို့(စ) ပဲ။
ဆု ကို တောင်းထားတယ်။
ဆရာမ လမင်းမိုမိုတို့ တူမလို့ပြောတယ်။
. အေးလဲ အရမ်းအေးတယ်။
. ဖြူဖြူပိန်ပိန် ရှည်ရှည် လေး။
ဖွဲ့ဘူးတဲ့ အချစ်တော်တွေထဲ က တစ်ယောက်ပေါ့။
သို့ပေမဲ့ သူ့စာအုပ် တွေ က ကိုယ့် စိတ်ဝင်စားရာမဟုတ်ခဲ့။
သူ့ညီမလေး က ဆုမြတ်မို လားမသိ။
သူ့အမေကြီး က အစ်ကို၊ မောင်လေးများ ရဲ့ စိန်ဂျွန်းကျောင်း က ဆရာမလဲ ဆရာမ၊ စာရေးဆရာမ နာမည်ကြီး နေနွယ်ဇင်မြင့်။
သူတို့ မောင်လေး အဆိုတော် ကိုမှိုး လေး က လည်း ချစ်စာလေးကိုးး
ညည်းအဘက ငါနဲ့မှ ရွယ်တူဟဲ့…မတမရဲ့…။
ဟာ ဟ … ငမှိုးကို ချစ်စရာလေး တဲ့…
ပြောပေးမယ် တိရား … အဲ ကိုမှိုးလေးမဟုတ်ဘူး…
ညည်းဘကြီးက ကျောက်စ်နဲ့ ကျောင်းနေဘက်…
သများ ၇ တန်းလောက်မှာ သူက ဆေးကျောင်းတက်နေပြီ ဆိုတော့။
အဲဒီ ရုပ်လေးပဲ မြင်ယောင်နေတယ်။
အဲဒီ လမင်းမိုမို အမျိုးသား ကိုနေမျိုးက ကျနော်နဲ့ MRTV4မှာ ဘောလုံးပွဲအတူ ကြေညာဘူးတယ်ဗျ ၊ ဆရာကျောက်ဘီလူးတင်မောင်ဆွေရယ် ၊ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆ မှာပေါ့ ၊
လမင်းမိုမိုသားက သမီးကြီးနဲ့ မူလတန်းမှာ ကျောင်းနေဘက် ၊
သူတို့က လှည်းတန်း ဇေယျာသီရိလမ်းမှာ နေတာ ၊
print ပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ပုံနှိပ်ပြီးစာမူလေးတွေ ဖြစ်စေ..
ရွာထဲလည်း.. လာ ရှဲ ပါဦးလို့… ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ… ခင်ဗျ ။
အဲ့ ဆုမြတ်​​တွေ လမင်း​တွေ နံမယ်ေ​လေးငါးလုံးနဲ့ ဆာ​ရေး စာရာ ​မ​တွေ တစ်​အုပ်​မှ မဖတ်​ဖူးဘူး ။
Bella ဆိုတဲ့နာမည်က ချစ်စရာကောင်းတယ်
(စာတိုပေစလေးတွေ print ပေါ်လည်းရောက်ပြီးပြီမို့)